को नियम कार्गो यातायात उज्बेकिस्तान एयरवेज
प्रविष्टि को उज्बेकिस्तान मा विश्व बजार द्वारा छ तीव्र विकास को संचार नेटवर्क सहित, उड्डयन. मध्य एशिया सबैभन्दा ठूलो विमान उज्बेकिस्तान एयरवेज गर्न खोजिरहेको छ को पूर्ण सदुपयोग अनुकूल स्थिति को देश को मा मार्गहरू लिङ्क युरोप संग दक्षिण पूर्व एशिया.
दुई सबै भन्दा ठूलो हवाई को ताशकहरुट र छन् हब हवाई लागि उज्बेकिस्तान एयरवेज छ । हामी प्रस्ताव को यातायात मा कार्गो कार्गो को यात्री विमान उडान नियमित आधार मा, र चार्टर उडान मा कुनै पनि दिशा मा कार्गो जहाज. हामी पनि प्रदर्शन को यातायात मा माल को निर्धारित उडान मा कार्गो जहाज मार्फत, विमानस्थल छ, जो यसको ढोका खोल्न, व्यापार संसारमा.
एक अन्तर्राष्ट्रिय रसद केन्द्र जोड्ने मुख्य रसद केन्द्र युरोप र एशिया
लागि सुहाउँदो शिपमेन्टहरू मा इष्टतम प्रयोग को क्षमता छ, सिर्जना लागि एक समूह बुकिंग. खतरनाक छन् उत्पादनहरु वा गर्न सक्छन् भन्ने पदार्थ एक महत्वपूर्ण जोखिम उत्पन्न गर्न स्वास्थ्य, सुरक्षा वा सम्पत्ति जब द्वारा हावा र जो वर्गीकृत छन् द्वारा नियमित मा खतरनाक माल परिवहन. उदाहरणका लागि, रंग, सुक्खा बरफ, ब्याट्री, मोटर, आदि, हो नियमित रूपमा सामान लागि खतरनाक परिवहन द्वारा हावा । को सुरक्षा को लागि, हावा परिवहन, सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर उत्पादनहरु वा पदार्थ हो ठीक पहिचान, वर्गीकृत, प्याकेज, चिन्ह, लेबल र दस्तावेज अनुसार प्राविधिक निर्देशन र. को नियम अनुसार, यो विमान आरक्षण को कार्गो गर्न छ कार्यान्वयन हुन छैन भन्दा पहिले दिन र छैन भन्दा पछि दिन अघि यो योजना प्रस्थान ।